China Cold Socks Socks ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Huanyi
sọks ọgwụgwọ sọks
Ngwunye ọgwụ oyi na-ekpo ọkụ na-eme ka ọ dị mma maka ọnya ụkwụ na-agwọ ọrịa ọzịza nke ọrịa ogbu na nkwonkwo neuropathy chemo
Anyị factory na-oditi site BSCI, anyị na ngwaahịa na-asambodo site SGS, OA, FDA.
Afọ 10 Ahụmahụ nke OEM, ODM. Nwere ike ịnye gị ndụmọdụ ndị ọkachamara maka agba agba ahaziri, akara ngosi, ngwugwu, nyere aka mepee ụzọ kacha mma maka jel oyi mkpọ ngwaahịa enyemaka.
Maka sọks ndị ahụ na-eme ka ahụ dị jụụ, ụlọ ọrụ anyị nwere nha na nhọrọ agba, dịka ọmụmaatụ ice blue, tiffany blue, purple, pink, green, black .Anyị nwere omenala na-acha ọcha ma ọ bụ oji na velcro, ọtụtụ ndụmọdụ ngwugwu maka gị ịhọrọ.
Maka ndị na-ajụ oyi ọgwụ ndị na-atọ ụtọ, ụlọ ọrụ anyị nwere nha na nhọrọ agba, dịka ọmụmaatụ igwe anaghị acha anụnụ anụnụ, tiffany blue, purple, pink, green, black. Anyị nwere omenala eriri ọcha ma ọ bụ oji na velcro, ọtụtụ aro maka ị họrọ.
Kpọtụrụ anyị maka ndepụta ọnụahịa kachasị ọhụrụ!
Ọ dị mfe iji sọks ọgwụ ịgwọ ọrịa maka nlekọta ụkwụ: Dị mfe ma dị irè, sọks anyị jụrụ oyi na gel ice packs bụ ezigbo ihe ngwọta ọgwụgwọ ụlọ iji nweta enyemaka na nkeji. Ị nwere ike ịgụnye ụdị gel gel dị iche iche na ma ọ bụ na-enweghị nsogbu, niile n'okpuru nyocha 150kgs nrụgide ma jide n'aka na ọ leakage ọ bụla.
1.Are ngwaahịa gị ọ dị mma maka nchekwa nri ma ọ bụ ahụ mmadụ?
Ihe onwunwe anyị niile bụ PVC, PE, Naịlọn, Lycra, Gel bụ ndị na-adịghị egbu egbu na FDA, MSDS, CE na-akọ.
2. Gini bu MOQ gi?
Ohaneze MOQ na-abụkarị 1000 ma ọ bụ 2000 ụzọ abụọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa na anyị nwere akwa ngwaahịa na eriri, anyị nwere ike ịkwado ịkwado ọnọdụ ahụ iji nye nkwado kachasị mma maka ndị ahịa iji nwalee ahịa
3. Gịnị bụ gị na-ebi akwụkwọ?
Anyị nwere ike ime silk ihuenyo ebi akwụkwọ, dechapụ ebi akwụkwọ, UV obibi ma ọ bụ tinye akwụkwọ mmado. Ga-ahọrọ ụzọ obibi kwesịrị ekwesị maka gị dịka ịmebe gị si dị.
kwuo ugwo 30% mgbe iwu nke T / T kwadoro. Anyị nwere ike ịnabata L / C dị ka iji buru ibu.
5. you nwere ike ịnye ihe nlele n'efu?
ee 1-3 mpempe free samples n'ihi na ị na ibu ga-anakọtara. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka omenala gị logo ma ọ bụ gị onwe gị udi, anyị kwesịrị atụle samples 'ego dabere na-ebi akwụkwọ ma ọ bụ nlereanya na-eri.
Nke gara aga: Icemụaka ice mkpọ
Osote: akpụ akpụ
Icekwụ Ice Pack
Thekwụ Agwọ Ice Ukwu
Gel Soothing sọks
Ngwunye Ice Maka etkwụ